HERO OF MYANMAR: ဒါတွေကျတော့မတွေးမိခဲ့ တာလား
[13:51 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
ဒီဖော်ပြချက်တွေဟာ မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မျက်လုံးစုံမှိတ် အော်နေကြသူတွေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်များ ဖြစ်ပါကြောင်း စုဆောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ မြစ်ဆုံသား
၂၅ . ၈ . ၂၀၁၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းများ
ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီးစာရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင် click
- သတင်းဆုပေး အကဲဖြတ်ရန် ကမ်းလှမ်းမှု ဦးဝင်းတင် ငြင်းပယ် click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အပြောင်းအလဲ လိုလားဟု ဆို click
- ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီများ တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့်ရရေး တောင်းဆို click
- ကင်တာနားကို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ တင်ပြကြ click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေး ကွင်တားနားနှင့် လေးပါတီ ဆွေးနွေး click
- အစိုး​ရ​ပြောင်း​သော်လည်း​ လူ့အခွင့်​အ​ရေး​အ​ခြေအ​နေ မတိုး​တက် click
- လွတ်လပ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီ မကြာမီ ဖွဲ့စည်းမည် click
- ဒီပဲယင်းအရေး ကုလသို့ တင်မည် click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်ရေး တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ click
- အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ကို ဓည၀တီရေတပ်ဌာနချုပ်မှူးက ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတာ ဘာကြောင့်လဲ click
- နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ဖျက်ဆီးထားမှု လာရောက်စစ်ဆေးမည် click
- ထိုင်း-မြန်မာနယ်ခြားကော်မတီ ချင်းရိုင်း၌ တွေ့ဆုံ၊ လွယ်လန်းဒေသ ပြန်ရရေး မြန်မာ တောင်းဆို click
- မူစယ်-မန္တလေးလမ်း၌ တိုက်ပွဲဖြစ်၊ အစိုးရတပ်ဘက် နှစ်ယောက် သေ click
- အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်တပ် လုံခြုံ ရေးတိုးချ click
- နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၇ ဦးကို ဒီကေဘီအေ ဖမ်းမိ click
- KIA ခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် မြန်မာစစ်သား ၂ ဦး ကျ၊ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- မောင်ထွန်းစိန်အား ခလရ (၁၀၅) က ပစ်သတ် click
- က​လေး​စစ်သား​ ပြန်လွတ်​ရေး​ အိုင်အယ်လ်အိုကို တိုင်မည် click
- လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေ လိုင်စင်သိမ်းခံရမှု ဥပဒေနှင့် မညီဟု ဆို click
- လိုင်စင်သိမ်းခံ ရှေ့နေများ လိုင်စင်ပြန်ရရေး လျှောက်ထားကြမည် click
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လိုင်စင်နှင့် ပညာ ပြန်လည်သင်နိုင်ရေး အတိုက်အခံများ ကြိုးစားမည် click
- ဒီမိုကရေစီကွန်ရက် ချဲ့ထွင်ရေး ဗေဒါအင်စတီကျု စတင်ကြိုးပမ်း click
- တရား​ရုံး​မထီမဲ့​မြင်ပြုမှုဥပ​ဒေ ဖျက်သိမ်း​ရေး​အဆို ရှုံးနိမ့်​၊ လွှတ်​တော်၌ လျှို့ဝှက်မဲ​ပေး​စနစ် ပျက်​နေ click
- ရသေ့တောင်အမတ်ကို အနိုင်ပေး၊ ပေါက်တောအမတ် ၃ ဦးကို ရက်ရွှေ့ထား click
- ကျောက်ဖြူတွင် လူခွန်ကောက်သည်ကို ရပ်တန့်ရန် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ပြည်သူများ တောင်းဆို click
- RFA က ဧရာဝတီ စကားဝိုင်း (သြဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၁၁) click
- ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည် အင်န်အယ်ဒီပါတီ (ဆောင်းပါး) click
- သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၂) (အောက်မေ့ဖွယ်) click
- စစ်အစိုးရရဲ့ ငြိ်မ်းချမ်းရေး ဘယ်တော့စမှာလဲ (ဆောင်းပါး) click
ထိုင်းရောက် မြန်မာတို့ နေ့တွက်ခ တိုးရမည်လော click
- ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်း အခွန်လျှော့ရန် ဒေသခံတို့ တောင်းဆို click
- ဧက ရာနှင့်ချီ သိမ်းထားသည့် လယ်ကိစ္စကို ဦးသိန်းစိန်ထံ တင်ပြမည် click
- ဒေါ်လာဈေး ပြန်တက်သဖြင့် ဆန်တင်ပို့မှု ပြန်စ click
- အသေးစား ချေးငွေအတွက် အများကြီး လုပ်ဖို့လို click
- တောင်ကြီး ရွှေညောင် ရေဘေး လူ ၁,၇၀၀ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ရောက် click
- ဒုတိယ ရေနက်ဆိပ်ကမ်း ပုသိမ်မြို့ ဖြစ်တော့မည် click
- အုန်းဖျန်စခန်း ဒုက္ခသည်များကို ဂျပန်နိုင်ငံက ခေါ်မည် click
- ရေကြီး၍ ကရင်နီဒုက္ခသည်တဦး ရေမျော သေဆုံး click
- ရုပ်ထွက်မကောင်းသည့် ကားစုတ်များကို စာရင်းကောက်နေ click
- ဒီးမော့ဆိုတွင် အင်တာနက်ဆိုင် တဆိုင်သာ ရှိ၍ သုံးခ ဈေးကြီးနေ click
- ဖားကန့်သို့ အပြန်ခရီး (ဆောင်းပါး) click
- ဂီတစင်များ (အသံလွှင့်ဆောင်းပါး) click
- ယူနီ ... တူညီ ... မူအတည်ဖြစ်ဖို့ (ဆောင်းပါး) click
- ဝက်သတ်သမားများ (၀တ္ထုတို) click
- ဂဒါဖီ ဖမ်းနိုင်သူ ဆုငွေရမည် click
- လစ်ဗျားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေဆဲ click
- ရုရှား လူမဲ့ ကုန်တင်အာဏာသယာဉ် ပျက်ကျ click
- ပြင်သစ်မှာ ခြိုးခြံချွေတာရေးအစီအစဉ်ကို အတည်ပြု click
- နျူကလီးယားဆွေးနွေးပွဲ ပြန်စဖို့ မြောက်ကိုရီးယား အသင့် click
- Apple ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်သူ Steve Jobs ရာထူးမှ နှုတ်ထွက် click
- Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ စီအီးအို Steve Jobs နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီ click
- ပန်းသီးရဲ့ CEO, Technological Master mind, Steve Jobs အနားယူ click
- အင်တာနက်က ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားတွေအတွက် တံခါးတွေကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီလား click
- အိုမင်းသူတို့ကမ္ဘာ click
( ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် Popular News ဂျာနယ်က မြန်မာ့သစ်တော အခြေအနေ သတင်းလေး ဖြစ်ပါ တယ်။ စိတ်ပျက် ဖွယ်ရာပါပဲ။ )
မြန်မာ့ သစ်တောများသည် တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် အရည်အသွေး ကျဆင်းလျှက်ရှိရာ မူလ ဂေဟစနစ်နှင့် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲ အဆင့်သို့ ပြန်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အနှစ် ၆၀ ခန့် ကြာနိုင်သည်ဟု သစ်တော ပညာရှင် ဦးအုန်းက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက ဂေဟစနစ် တန်ဖိုး၊ ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲများ၏ တန်ဖိုးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် အနာဂတ် သစ်တော အုပ်ချုပ်ရေး လိုအပ်နေပြီး သစ်တောတွင် လက်ရှိ တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသော ၀န်ထမ်းများ၏ တာဝန်သိ၊ သစ္စာရှိမှုတို့ပေါ်တွင်လည်း တည်မှီနေသည်ဟု ဦးအုန်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
မြန်မာ့ သစ်တောများသည် မြေအသုံးချမှုသို့ ပြောင်းပစ်နေခြင်းနှင့် အခြားအကြောင်း အမျိုးမျိုးတို့ကြောင့် ပျက်စီးနေရ သကဲ့သို့ သဘာဝကို ပြုစုပျိုးထောင်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် သစ်တော အရည်အသွေးများ ကျဆင်းနေကြောင်း၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ် အတွင်း ကျွန်းနှင့် ပျဉ်းကတိုးတို့၏ ထုထည်နှင့် ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းခဲ့ရာ ကျွန်းသစ်သည် ၁၉၉၀ တွင် ကုဗမီတာ သန်းပေါင်း ၂၄၁ ဒသမ ၉၁ နှင့် ပါဝင်မှု ၈ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေရာမှ ကုဗမီတာ သန်းပေါင်း ၁၄၉ ဒသမ ၄ နှင့် ပါဝင်မှု ၅ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသို့ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ ထိပ်တန်းသစ် ၁၀မျိုးကို ကြည့်လျှင်လည်း ထုထည် ကုဗမီတာ သန်းပေါင်း ၁၃၄၀ ဒသမ ၀၅ နှင့် ပါဝင်မှု ၄၇ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေရာမှ ထုထည် ကုဗမီတာ သန်းပေါင်း ၅၅၉ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပါဝင်မှု ၁၉ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
" ပျဉ်းကတိုးဆိုရင် တော်တော် ဆိုးတယ်။ ၁၉၉၀ ကနေ ၂၀၀၀ အထိ သစ်တောတွေမှာ ပျဉ်းကတိုး ပါဝင်မှုက ၁၀ဒသမ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းခဲ့တယ်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၇၂ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ကျွန်တော့် သစ်တောမှာ သင်းသတ်လုပ်ငန်း၊ ပင်ကျပ်နုတ် လုပ်ငန်းတွေ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတွေနဲ့ တောဆင်းတာတွေ ပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံအနှံ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က သစ်တောတွေမှာ ကျွန်းပါဝင်မှုက သစ်မျိုးအားလုံး ပါဝင်မှုရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း အထက်မှာရှိပြီး ပျဉ်းကတိုး ပါဝင်မှုက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အထက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆို ပျဉ်းကတိုး ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်နေပါပြီ " ဟု အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်က ထပ်လောင်းပြောသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ ၁၀ နှစ်တာ အတွင်း သစ်တော အရည်အသွေး သ်ိသိသာသာ ကျဆင်း သွားသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်း ၁၀နှစ် အတွင်း၌ အဖိုးတန် သစ်များကို ထုတ်ယူခဲ့ သလောက် သစ်တောများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် အတွက် ထိရောက်သော ပြုစု လုပ်ဆောင်ချက် နည်းပါးသည်မှာ ထင်ရှားကြောင်း ၊ ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ရာတွင် ကျော်ကြား ခဲ့သော ကညင်နှင့် သင်းဝင်တို့ သည်လည်း လျော့နည်း ရှားပါး သွားသောကြောင့် ပြည်တွင်း၌ ရောင်းဝယ်သော သစ်မျိုး အသစ်ဖြစ်သည့် စဂတ်နှင့် သစ်စေးတို့ကို အစားထိုး ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
မသေချာရင် အားလုံး သေမှာ - ဧရာဝတီ click here
ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး အမျိုးသမီးစာရင်း ဒေါ်စု ပါဝင် - ဗွီအိုအေ click here
မစ္စတာ ကင်တားနား မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး နောက်ဆုံးအခြေအနေ ဒေါ်စုနဲ့ ဆွေးနွေး - ဗွီအိုအေ click here
လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် အင်းစိန်ထောင်တွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တချို့နဲ့ တွေ့ဆုံ - ဗွီအိုအေ click here
လွတ်လပ်ခွင့်ကို ရှာယူနေရမယ် - ဧရာဝတီ click here
နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို DKBA ၀င်တိုက်၊ သုံ့ပန်း ၇ ဦးရရှိ - ဧရာဝတီ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံရေးသက် ၂၃ နှစ် ပြည့်ပြီ - ဧရာဝတီ click here
စိုးရိမ်မိတယ် ဧရာဝတီ - ဧရာဝတီ click here
မလေးမှ ဒုက္ခသည်များ ပြန်ပို့ခံရမည်ကို စိုးရိမ် - ဧရာဝတီ click here
လိုငွေပြမှု သတင်းအမှောင်ချ - ဧရာဝတီ click here
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တွင် လုံခြုံရေးနှင့် ခိုးမှူ လျှော့ပါးရေး ကော်မရှင်ပစ္စည်း လှည့်ရောင်းခွင့် တားမြစ် - ခိုနူန်းထုန် click here
ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ ဖွဲ့ပြီ - ခိုနူန်းထုန် click here
"သိမ်ကြီးဈေးတစ်ဝိုက် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများ အတင့်ရဲနေ" - ရဲရင့်ငယ် click here
ကုလ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ကင်တားနား ဆက်လက်ထောက်ခံ - ရဲရင့်ငယ် click here
အသေးစားချေးငွေ လိုအပ်ချက်၏ ၁ဝ ရာနှုန်းသာ ပေးနိုင်သေး - ရဲရင့်ငယ် click here
လိုင်စင်သိမ်းခံ ရှေ့နေများ လိုင်စင် ပြန်ရရေး လျှောက်ထားကြမည် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဒုတိယရေနက် ဆိပ်ကမ်း ပုသိမ်မြို့ ဖြစ်တော့မည် - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဦးသိန်းစိန် အပြောင်းအလဲ တကယ် မြင်ချင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယူဆ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
အမေရိကန် ကိုယ်စားလှယ် Mr. Derek Mitchell မြန်မာနိုင်ငံကို အမြန်ဆုံး သွားလို - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့့သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဆွေးနွေးမှု ဂျာမဏီ ကြိုဆို - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ကင်တာနားတွေ့ဆုံ - အာရ်အက်ဖ်အေ click here
မြန်မာစစ်တပ် မှားယွင်း ပစ်ခတ်၍ ပလောင်ရွာသား တဦး သေဆုံး - ကန္တရဝတီတိုင်းမ် click here
ဒီးမော့ဆိုတွင် အင်တာနက်ဆိုင် တဆိုင်သာ ရှိ၍ သုံးခ ဈေးကြီးနေ - ကန္တရဝတီတိုင်းမ် click here
လူ့အခွင့်အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လွှတ်တော်အမတ်များ နေပြည်တော်၌ ဆွေးနွေးစဉ် စစ်မြေပြင်ရှိ သျှမ်းရွာတရွာအား အစိုးရစစ်တပ်မီးရိူ့ - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများ တိုးတက်မှု အနည်းငယ်ရှိဟု အမတ်များပြော - မဇ္ဈိမ click here
အင်းစိန်ထောင် အခြေအနေ တိုးတက်လာဟုဆို - မဇ္ဈိမ click here
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ခေါင်းစဉ်ကြောင့် ဂျာနယ် သတိပေးခံရ - မဇ္ဈိမ click here
တိုင်းရင်းသား ဒေသနှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအရေး ပါတီဟောင်း ၈ ခုတောင်းဆို - မဇ္ဈိမ click here
ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေး ဌာနချုပ်အနီး အစိုးရတပ် အင်အားတိုး - မဇ္ဈိမ click here
စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိစ္စ ကင်းတာနားထံ ကျားဖြူပါတီတင်ပြ - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
ယခုနှစ် ဧရာဝတီမြစ်အထက်ပိုင်း မြေနုကျွန်းများ ရေမမြှပ်သေး - သျှမ်းသံတော်ဆင့် click here
အိန္ဒိယ ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ကို ဓည၀တီ ရေတပ် ဌာနချုပ်မှူးက ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ သွားကြိုတာ ဘာကြောင့်လဲ - နိရဉ္စရာ click here
ကင်တားနား စွမ်းဆောင်ရည်ဒေါ်စုယုံကြည် - ဘီဘီစီ click here
ကျန်းမားရေးအတွက် ဘတ်ဂျက်ငွေနည်း - ဘီဘီစီ click here
ဆန်ဖရန်မြန်မာ ဒီမိုအင်အားစု ၈၈အခမ်းအနား ရသုံးငွေစာရင်း ထုတ်ပြန်လက်ကျန်ငွေကို ဥက္ကလံမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဝေယျဝစ္စအတွက် လှူမည် - မိုးမခ click here
နေပြည်တော် စီးပွားရေးမြှင့်တင်မှု ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်ကောင်းမရှိဟု ဖလုံ-စဝေါ်ပြောကြား - KIC click here
ပင်လုံစာချုပ်အတိုင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးမြန်မာအစိုးရလက်မခံ - KIC click here